Aza adino mihitsy ny hetsika miaraka amin'ny fampidirana an'i Zeevou miaraka amin'ny Google Calendar
Integrations » Google Calendar
Google Kalandrie & fampidirana Zeevou
Indraindray ianao te-hamorona hetsika mandeha ho azy sy fampahatsiahivana amin'ny kalandrie zaraina na tsy miankina. Amin'ny fampidirana fotsiny ny kalandrie Google anao amin'ny Zeevou ny alalan ' Zapier, ianao dia hanana fampahatsiahivana momba ny famandrihana miaraka amin'ireo hetsika tianao kokoa ho an'ny mpiasanao mba hiomanana sy momba ny toetr'andro. Ankoatr'izay, azonao atao ny mitondra automatique ambonimbony kokoa amin'ny fandaharam-potoanan'ny fikolokoloana amin'ny alàlan'ny fampidirana an'i Zapier amin'ny Zeevou. Ampifandraiso fotsiny ny Google Calendar miaraka amin'i Zeevou, amboary ny fandaharam-pikojakojana ho an'ny trano hofan-trano fohy tsirairay avy, omeo ny mpiasa sahaza an'io asa io, ary afaka mandeha ianao.
Mametraha fampahatsiahivana mandeha ho azy momba ny famandrihana, fizahana, sns.
Automate fikarakarana olana amin'ny fandaharam-potoana sy ny fanendrena andraikitra
Safidio ny fanentanana isan-karazany mba tsy hanadino hetsika iray atsy ho atsy
misoratra anarana amin'ny Google Calendar